cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအား: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical တိကျတဲ့ (2000) ။ - Brain On Porn - ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုနှင့်ဆင်တူသည့်ကိုကင်းများကို ဦး နှောက်ဖွင့်ခြင်း
cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအား: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical တိကျတဲ့ (2000) ။ - ဦး နှောက်ကို activate လုပ်သည့် porn နှင့် activation ကဲ့သို့သော cueine များသို့ ဦး နှောက်ကို activate လုပ်ခြင်း
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000 Nov;157(11):1789-98.
Garavan H ကို1, Pankiewicz ဂျေ, ပွင်, ချို JK, Sperry L ကို, Ross TJ, Salmeron BJ, Risinger R ကို, ကယ်လီ: D, Stein EA.
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေသည့်အပြုအမူကိုတွန်းအားပေးနေသောတွန်းအားတုန့်ပြန်မှုအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုယူဆကြသည်။ သို့သျောလညျး, ယန္တရားများ, အခြေခံ neuroanatomy နှင့်ဤ neuroanatomy ၏တိကျသောသေးအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။
ဤပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွေ့အကြုံရှိသောကိုကင်းသုံးစွဲသူများ (N = 17) နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောဘာသာရပ်များ (N = 14) သည်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကိုဖြတ်သန်းစဉ် ၁) ကိုကင်းကင်းကိုဆေးလိပ်သောက်သူတစ် ဦး၊ ၂) ပြင်ပသဘာဝမြင်ကွင်းများနှင့် (၃) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည့်ရုပ်ပုံသုံးကားကိုကြည့်ရှုခြင်း။ ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သောအခါကိုကင်းသုံးစွဲသူများသိသိသာသာတက်ကြွမှုကိုပြသသည့်နေရာများအနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏တွန်းအားသည့်နေရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုကိန်းဂဏန်းများသည်ကိုကင်းရုပ်ရှင် (လူ ဦး ရေနှင့်သက်ဆိုင်မှု) ကိုကြည့်ရှုသည့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်သဘာဝရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေသောကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါသိသာစွာကြီးထွားမှုကိုပြသရန်လိုအပ်သည်။
ဤစံနှုန်းများကိုကျေနပ်စေသော ဦး နှောက်ဒေသများသည်များသောအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးအရှေ့ဘက်တွင်ရှိသောအမြှေး (အလယ်အလတ်နှင့်အလယ်တန်းရှေ့တန်း gyri၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ယုတ်ညံ့သည့်ရှေ့ပိုင်း gyrus)၊ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ယုတ်ညံ့ parietal lobule)၊ insula နှင့် limbic lobobe (anterior နှင့် posterior cingulate gyrus) တို့ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်လှုပ်စေသောနေရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်ဒေသ ၁၃ ခုအနက် ၃ ခုသာ (ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်း၊ ညာဘက်ယုတ်ညံ့သည့် parietal lobule နှင့် caudate / lateral dorsal နျူကလိယ) သည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်လိင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးစဉ်ကထက်ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်များတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာပါဝင်သည်ကိုပြသည်။ ကိုကင်းတွေကိုကိုကာကိုလာအသုံးပြုသူများအတွက်သဘာဝ evocative လှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့အလားတူ neuroanatomical အလွှာ activated ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကိုကင်းရုပ်ရှင်၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်လိင်ရုပ်ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်အကြောင်းအရာများထက်တုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။
ဤရွေ့ကားဒေတာကိုအကြံပြုတဏှာတစ် ဦး ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ထူးခြားသော neuroanatomical circuitry နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိကြောင်းအကြံပြု; အစား, ကိုကင်းအသုံးပြုသူမှထူးခြားသောကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက် nondrug evocative လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူမြင်သည်နှင့်နှိုင်းယှဉ် ဦး နှောက် activation ထုတ်လုပ်ရန်သင်ယူ, မူးယစ်ဆေးဝါး -related တွေကိုများ၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမြဲစွဲမြဲနေသောအတွေ့အကြုံများကိုတမ်းတနေခြင်း၏အရေးပါမှုကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည် (1-3)။ မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာသည်အင်အားကြီးမားသောစိတ်အားထက်သန်မှုရှိသောပြည်နယ်သို့မဟုတ်ကိုကင်းသုံးစွဲသူအားကိုကင်းကိုရှာဖွေရန်တွန်းအားပေးသည့်ပြင်းထန်သောစိတ်ဆန္ဒဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ သို့သော်ထိရောက်သောနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲလိုမှု၊ ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Phenomenologically, ကိုကင်းသုံးစွဲသူများကတဏှာတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် (ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီသည်မိနစ် ၂၀ ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကြာရှည်မှုရှိကြောင်း) ), variable ကိုပြင်းထန်မှုသည်နှင့်မျိုးစုံနည်းလမ်းများအားဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက်များတွင်ကိုကင်းကိုတုန့်ပြန်မှုပြန်လည်ပေးနိုင်သည် (5) နှင့်နောက်ထပ်ကိုကင်းများအတွက်လူသားများအတွက်တဏှာသွေးဆောင်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့သည် (6)။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေပြုနည်းစနစ်များကိုမကြာသေးမီကကိုကင်းကျူးလွန်သူများ၌မိမိကိုယ်မိမိသိလိုစိတ်ပြင်းပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (7)။ သုတေသနအစုအဝေးတစ်ခုအရမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုလည်းအကြံပြုထားသည် (3, 8, 9) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော cue- သွေးဆောင်တဏှာ၏ခွန်အားကိုကင်းမှီခို၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (10)။ Childress နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (8) ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်တဏှာအားအစပျိုးသူများအဖြစ်မကြာခဏညွှန်းဆိုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေသည့်သူငယ်ချင်းနှင့် dysphoria ကဲ့သို့သောအတွင်းပိုင်းအချက်များဖြစ်သည်။ အက်ကြောင်းပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှု၏အဆုံးအဖြတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုအရဆေးလိပ်နှင့်ဆက်နွှယ်သော ၃၄% သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရပြီး ၁၁% သည်ငွေကိုင်တွယ်မှုနောက်သို့လိုက်ကြသည်။ (11)။ သို့သော် cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်မက်မှုစတင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံခံဆဲလ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များနှင့်၎င်းတို့အားအခြားနှိုးဆွသည့်ပြည်နယ်များနှင့်မည်သို့ကွာခြားနိုင်သည်ကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်သေးပါ။ ထိုသို့သောအချက်အလက်များသည်ကိုကင်းကုသမှုအတွက်အမူအကျင့်နှင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကြား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုအသစ်များအတွက်အရေးပါသည်။ လက်ရှိကုသမှုနည်းလမ်းများသည်ကုသမှုကိုရှာဖွေနေသူအများစုအတွက်လုံးဝထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့်အခြေအနေသည် ပို၍ အရေးတကြီးဖြစ်လာသည်။ noninvasive neuroimaging နည်းစနစ်များသည်ယခုဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏ neuroanatomical အခြေခံများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်အခွင့်အလမ်းရရှိသည်။
ယခင် neuroimaging သုတေသနသည် prefrontal နှင့် limbic တည်ဆောက်ပုံများအပါအ ၀ င်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွန်းအားတွင် cortical နှင့် subcortical ဒေသများစွာကိုပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Self- အစီရင်ခံတဏှာရမှတ်များနှင့် prefrontal နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည် (12)။ အလားတူတိုကျရိုကျပါဝင်ပတ်သက်မှု Maas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (13), အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့် (fMRI) အားဖြင့်လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex နှင့်ကိုကင်း -related လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်နှင့်အတူကိုက်ညီကြောင်း anterior cingulate အတွက်သိသာထင်ရှားသော activation သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြားနေကြားခံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းသည် dorsolateral prefrontal၊ medial orbitofrontal၊ retrosplenial, peristriate နှင့် temporal နှင့် parietal ဒေသများတွင်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်တိုးမှုတိုးပွားစေသည်ဟုလည်းသတင်းထုတ်ပြန်သည် (14)။ Self- အစီရင်ခံတမ်းတအစီအမံများနှင့် dorsolateral prefrontal cortex, cerebellum နှင့် medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်ဒေသတွင်းနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အကြား 0.60 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏သိသိသာသာဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြား neuroimaging လေ့လာမှုများသည်ကိုကင်းတပ်မက်မှုတွင်တိုကျရိုကျနှငျ့ limbic ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုပုံတူကူးယူထားသည် (15-17)။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အာရုံခံပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ထွန်းသစ်စပုံရိပ်ဟာပုဂ္ဂလဒိive္တဏှာအတွေ့အကြုံထုတ်လုပ်ရန်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်လုပ်သိမြင်ခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များများစွာ၏ပါဝင်မှုကိုထင်ဟပ်သည်ဟုယူဆရပေလိမ့်မည်။
ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်တဏှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဆုံးဖြတ်ချက်သည်အချို့သောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာတဏှာတုံ့ပြန်မှုလူ ဦး ရေနှင့်အကြောင်းအရာတိကျတဲ့နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်သင့်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်ကိုကင်း - နုံနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်ကိုကင်းလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်ပေမယ့်ဘိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ, မပြော (18)။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသတ်မှတ်ချက်၏သင့်လျော်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏နှိုင်းယှဉ်မှုလှုံ့ဆော်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နှိုးဆော်သံတစ်ခုတိုး cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Ehrman et al မှပြသထားသည့်အခြားမဟုတ်သောကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများ (ဥပမာ opiate-specific paraphernalia) မှဤနှိုးဆော်ခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ), တ ဦး တည်းကအခြားနှိုးဆွလှုံ့ဆော်မှု (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ evocative လှုံ့ဆော်မှု) အလားတူတုံ့ပြန်မှုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကိုကင်းမှတုန့်ပြန်သည့်နျူအာနိုအက်တမ်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်အခြား evocative လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ထင်ဟပ်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအတာသည်အချက်နှစ်မျိုးလုံးမှဖြစ်ပေါ်စေသော (ဘုံ) လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကိုထွန်းလင်းစေနိုင်သည်။ ဒီအဆုံးမှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှုကကိုင်းသုံးစွဲသူတွေမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာကိုကင်းသုံးစွဲသူများမှာလေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ neuroanatomical တုန့်ပြန်မှုဟာကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများ (ဆိုလိုသည်မှာကိုကင်း - နုံနှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များမှာမပါ ၀ င်ဘူး) နဲ့ကိုကင်းလှုံ့ဆော်မှုများနဲ့ထူးခြားမှုရှိ / မရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအတွက်မဟုတ်ပါ) သို့သော် nondrug evocative လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။
စုစုပေါင်းအတွေ့အကြုံရှိကိုကင်းသုံးစွဲသူ ၂၄ ဦး နှင့်ကျန်းမာသောနှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ် ၁၈ ခုပါ ၀ င်သည်။ ဘာသာရပ်များကိုဒေသခံသတင်းစာကြော်ငြာများမှစုဆောင်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများကိုစစ်ဆေးမှုပြုခဲ့ရာကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အဓိကနည်းလမ်းမှာ freebase (crack) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့်သာအဓိကအသုံးပြုသောသူများသာပါဝင်သည်။ မည်သည့်ဘာသာရပ်မှကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုမှု မှလွဲ၍ မည်သည့် ၀ င်ရိုးကိုမျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူ ၁၇ ဦး (အမျိုးသား ၁၄ ယောက်နှင့်အမျိုးသမီးသုံး ဦး၊ အသက် ၃၄ နှစ်၊ အသက်အပိုင်းအခြား ၂၇ မှ ၄၄ နှစ်) နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ် ၁၄ ခု (အမျိုးသားကိုး ဦး နှင့်အမျိုးသမီး ၅ ဦး; ပျမ်းမျှအသက် ၂၆ နှစ်၊ အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၃၉ နှစ်အထိ) သည်ဖယ်ကျဉ်ထားသူများအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသည် စံနှင့် fMRI ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူ ၁၇ ယောက်တွင်ကိုးယောက်မှာကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများဖြစ်ပြီးရှစ်ယောက်မှာအာဖရိကန်အမေရိကန်များဖြစ်သည်။ ၁၃ ခုမှာလက်ယာလက်ယာများ၊ တစ် ဦး မှာဘယ်သန်၊ 24 နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအနက် 18 ကော့ကေးဆပ်, တ ဦး တည်းအာရှနှင့်တစ် ဦး ဟစ်စပန်းနစ်; ၁၃ ယောက်ကညာသန်သန်သန်တစ်ယောက်၊ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ပျမ်းမျှလစဉ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁,၀၂၅ (အကွာအဝေးမှ $ ၁၅၀ မှ ၅၀၀၀ အထိ) ကိုကာကိုင်းသုံးစွဲမှု ၁၁ နှစ် (range = 14-34) ပျမ်းမျှ။ နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များကိုကင်းအသုံးပြုမှု၏သမိုင်းမအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်အားလုံးသည် ၀ ီကွန်ဆင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုထားသောဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသိပေးအကြောင်းကြားစာများရေးသားခဲ့သည်။
MRI ယူနစ်သို့ရောက်သောအခါဘာသာရပ်တစ်ခုစီသည်သဘောတူညီချက်ပုံစံများကိုဖြည့်ပြီးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းလုပ်ဆောင်မည့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုရယူပြီးလေ့ကျင့်သည်။ ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်အပိုင်းအစများနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်ကိုဘာသာရပ်၏ခြေထောက်ပေါ်ရှိဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ပြန်ပရောဂျက်လုပ်ပြီးရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း၏ ဦး ခေါင်းကွိုင်၏အတွင်းပိုင်းတွင်ကပ်ထားသည့် Prism မျက်မှန်များ၏အကူအညီဖြင့်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ နားကြပ်မှတစ်ဆင့်ပလတ်စတစ်ပြွန်များမှတစ်ဆင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဗွီဒီယိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုစကင်နာဆူညံသံကိုလျော့ကျစေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာနှင့်အတူသုံးရုပ်ရှင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကိုကင်းရုပ်ရှင်တွင်“ အက်ကွဲကြောင်းကင်း” ကိုအမှန်တကယ်ဆေးလိပ်သောက်စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည့်အာဖရိကန်အမျိုးသားနှစ် ဦး နှင့် (ဂျင်ပုလင်းထဲ၌ရေဖြစ်သည့်“ အရက်”) ကိုသောက်သုံးခြင်းတွင်ကိုကင်းရုပ်ရှင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အမျိုးသားများသည်အတွေ့အကြုံရှိကိုကင်းသုံးစွဲသူများဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကိုစစ်မှန်ကြောင်းသေချာစေရန်ယခင်နှင့်လက်ရှိကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ တီသူကသဘာဝရုပ်ရှင်၌သာယာလှပပြင်ပပုံများပါရှိသည် လိင်ရုပ်ရှင်တွင်အုပ်စုလိုက်လိင်ကွဲလိင်လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီသည် ၄ ​​မိနစ်ကြာပြီးတစ်မိနစ်လျှင် ၃ မိနစ်အပြာပြာရောင်ဖြင့်ပြသထားသည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသည်သဘာဝရုပ်ရှင်ကိုပထမ ဦး ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးလိင်နှင့်ကိုကင်းဇာတ်ကားများ၏အစီအစဉ်ကိုဘာသာရပ်များတွင်အပြန်အလှန်ထိန်းညှိထားသည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီပြီးသည်နှင့်ဘာသာရပ်များသည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်အလုပ်ကို ၅ မိနစ်ကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီသည် ၃ မိနစ်နားချိန်၊ ၄ မိနစ်ရုပ်ရှင်နှင့် ၅ မိနစ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းတို့ပါဝင်သည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီ၏နောက်ဆက်တွဲအလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုများပြီးနောက်ဘာသာရပ်များသည်ယခင်ရုပ်ရှင်၏ပါဝင်မှုအပေါ်သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်နောက်ကြောင်းပြန်အစီအစဉ်များကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်မှဘာသာရပ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုအဓိကထားသောမေးခွန်းများ (စားပွဲတင် 1) ။ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းသည်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ကားများအကြားမည်သည့် cue- သွေးဆောင်မှုတွန်းအားကိုလျှော့ချရန် distrogn အဖြစ်နှင့်သိမှုလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တပ်မက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ဤအဘို့ကို၏ရလဒ်များကိုတခြားနေရာအစီရင်ခံပါလိမ့်မည်။
လေ့လာမှုအပြီးတွင်ကိုကင်း (သို့) လိင်ရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်များသည်ဘာသာရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားလုံးသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ပြီးနောက်ကုထုံး“ ဆွေးနွေးချက်” ကိုခေတ္တခဏလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးစိတ်ရောဂါဆရာဝန်ကသူတို့အားကင်းကိုတမ်းတနေခြင်းမရှိတော့ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်အထိဆေးရုံမှဆင်းခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ ယခင်လေ့လာမှုမှာ (20), သွေးကြောသွင်းကင်းစမ်းသပ်မှုတွင်ပါဝင်ရန်နောက်ဆက်တွဲအဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတစ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအခြေအနေတွင်တစ် ဦး မူးယစ်ဆေးဝါး -related စမ်းသပ်အခြေအနေတွင်ထံမှအနည်းငယ်သာလွှဲပြောင်းအကြံပြုထားသည်သောအစီရင်ခံခဲ့သည်။
fMRI Scanning လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနေသော ၇ မီလီမီတာရှိသောတူညီသော ၇ မီလီမီတာ sagittal အချပ်များကို gradient-echo, echo-planar pulse sequence (TE =7msec; TR = 40 msec; view of field = 6000 cm; 24 × 64 matrix) ကို အသုံးပြု၍ စုဆောင်းခဲ့သည်။ လေယာဉ် resolution ကို = 64 × 3.75 မီလီမီတာ) ။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးကို ၃.၅ စင်တီမီတာအတွင်းအကျယ်သုံးလက်တံပါသည့်ဒေသရှိ gradient ကွိုင်နှင့်အဆုံးတွင်အကျယ်အ ၀ န်းရှိသောငှက်လှောင်ငှက်ရေဒီယိုလှိုင်း၏ ဦး ခေါင်းကွိုင်တပ်ဆင်ထားသော 3.75-T Signa Scanner (GE Medical Systems, Milwaukee) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (21)။ ကွိုင်အတွင်း ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ရန်ရေမြှုပ်ထိုးခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ high-resolution ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းပျက်စီးယိုယွင်း gradient ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ activation ၏နောက်ဆက်တွဲခန္ဓာဗေဒမူပြောင်းခွင့်ပြုပါရန်, တည်ငြိမ်ပြည်နယ်ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်တွေအတွက်ဝယ်ယူပြန်ပြောပြအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်မတိုင်မီဝယ်ယူခဲ့သည်။
data processing အားလုံးကို AFNI version 2.2 ဖြင့် software package ဖြင့်ပြုလုပ်သည် (22)။ In- လေယာဉ်ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်းနှင့်အစွန်းထောက်လှမ်း algorithms ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ဒေတာကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ cine ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည့်အဘယ်သူ၏ fMRI အချိန်စီးရီးသည်သိသာထင်ရှားသည့်ကျန်ရှိနေသေးသော ဦး ခေါင်းကိုလှုပ်ရှားမှုရှိသေးသည်ကိုထိုရုပ်ရှင်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီရုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကိုကင်းအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်အတွက်တင်ပြနေကြသည် စားပွဲတင် 1။ စုစုပေါင်း ၄၇% သောကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏ရုပ်ရှင်နှင့် ၅၇% နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များကိုလေ့လာနိုင်သည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူရုပ်ရှင်၏ ၄၀% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြသထားသောရုပ်ရှင်များ၏ ၃၅% ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးကျန်အချက်အလက်များကိုရယူခြင်းတွင်နည်းပညာပြtechnicalနာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရေးပါသောကိုကင်းရုပ်ရှင်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူအားလုံးသည်လက်ရှိသုံးစွဲသူများဖြစ်ပြီးမည်သူမျှကုသမှုမခံယူကြပါ။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီ၏ ၇.၅ မိနစ် (၇၅ ပုံ) သည်လက်ရှိ fMRI စစ်ဆေးမှုတွင်ပါဝင်သည်။ ယင်းတွင် ၃ မိနစ်အခြေခံအချိန်ကာလ၊ ၄ မိနစ်ရုပ်ရှင်နှင့်ပထမ ၃၀ စက္ကန့် ၃၀ ကြာအနားယူသည့်အလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ voxel ၏တုန့်ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်ဤ ၇.၅ မိနစ်ကာလအတွင်းရရှိသော fMRI အချက်ပြများကို non-linear regression technique ကို အသုံးပြု၍ per-voxel အခြေခံပေါ်တွင် beta ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်ပုံစံလုပ်သည်။ (23) (ပုံ 1) ။ beta ဖြန့်ဖြူးမှုကိုလက်တွေ့တွက်ချက်မှုများအရရွေးချယ်သည်၊ beta model ၏စတင်ချိန်ကိုဗီဒီယိုစတင်ပြီး ၁.၅ မိနစ်အတွင်းအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားခဲ့ပြီး၊ အကောင်းဆုံး linear fit သည်ဤစတင်ခြင်းအချိန်မတိုင်မီအချိန်စီးရီးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အခြား beta ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း (ထပ်ကိန်းထပ်ကိန်း [k] နှင့်ထပ်ကိန်းနှစ်ခု [α, β]) ၏အခြားသတ်မှတ်ချက်များ။ပုံ 1voxel တစ်ခုချင်းစီ၏အချိန်စီးရီးများအတွက်အကောင်းဆုံး - သင့်လျော်သောပုံစံကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်) ထိထိရောက်ရောက်မတားဆီးနိုင်ပါ။ ပဏာမဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကအချက်အလက်အချိန်စီးရီးတွင်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများမကြာခဏဆိုးရွားသော nonlinear မော်ဒယ်မထိုက်မတန်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထိခိုက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုကတည်းကအချိန်စီးရီးဒေတာ, nonlinear မော်ဒယ်မတိုင်မီ 0.01 Hz အထက်အားလုံးကြိမ်နှုန်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရန် filter ခဲ့ကြသည်။ voxel တစ်ခုစီအတွက် beta model ၏ curve အောက်ရှိareaရိယာကိုအကောင်းဆုံး linear fit (အောက်တုန့်ပြန်မှုမရှိသော null hypothesis) အောက်ရှိpercentageရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤကွေးအတိုင်းအတာအောက်ရှိpercentageရိယာ၏ဤရာခိုင်နှုန်းသည်ရုပ်ရှင်ပါအကြောင်းအရာများအတွက်ပေးထားသော voxel ၏တုံ့ပြန်မှုပမာဏကိုခန့်မှန်းသည်။ပုံ 1) ။ အဆိုပါကွေးအလုပ်လုပ်ပုံရိပ်တွေအောက်မှာofရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုစံ stereotaxic ကိုသြဒိနိတ်စနစ်သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြသည် (24) နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း isotropic gaussian filter ကိုမှာ 4.2 မီလီမီတာအပြည့်အဝအကျယ်ကိုအသုံးပြု။ အားဖြင့် Spatial မှုန်ဝါး။ ဤရွေ့ကားအလုပ်လုပ်ပုံရိပ်များ activation မြေပုံများအဖြစ်နောက်ပိုင်းတွင်ရည်ညွှန်းကြသည်နှင့်အောက်ပါအုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဒေသခံနှင့် Cocaine တွန်းအား၏အထူးသဖြင့်
အဘယ်သူမျှမအကျိုးသက်ရောက်မှု၏တရားမဝင်သောအယူအဆဆန့်ကျင်တစ် ဦး ကနမူနာ t ကိုစမ်းသပ်သည့်ကင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုကိုကင်းသုံးစွဲသူများအဘို့အကွေးအတိုင်းအတာအောက်မှာofရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဤသည် t စမ်းသပ်မှုတစ်ခု voxel- ပညာရှိ p တန်ဖိုးကိုနှင့်အတူတံခါးခုံနှင့် 0.0025 တစ်ခုချင်းစီကိုသိသိသာသာ voxel ပိုကြီးတဲ့ 100-μlတဆက်တည်းသိသိသာသာ voxels ၏စုစည်းမှု (မူလဝယ်ယူ voxels ၏အရွယ်အစားနှင့်အကြမ်းဖျင်းတန်းတူ) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူတံခါးခုံ, voxels ဖော်ထုတ်ကြောင်း ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်ကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုတုန့်ပြန်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ voxel ပညာတံခါးခုံနှင့်အနိမ့်ဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစားကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုအခြားနေရာများတွင်ဖော်ပြထားသည် (25)။ ဤစံနှုန်းများမှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြွတ်သိပ်ခြင်းများသည်အောက်ပါနှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသောအလုပ်လုပ်သောဒေသများကိုသတ်မှတ်သည်။
ဤဒေသများ၏တုန့်ပြန်မှုသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ (လူ ဦး ရေဆိုင်ရာတိကျမှု) အတွက်ထူးခြားမှုရှိ / မရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကိုကင်းရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့နေစဉ်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏သက်ဝင်ဒေသများသည်ကိုကင်းရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့နေစဉ်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များ၏သက်ဝင်မြေပုံများအပေါ်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ အကျိုးစီးပွားများ၏ဒေသများနှစ်ခုနမူနာ t ကိုစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အကျိုးစီးပွားဤဒေသများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုကင်းရုပ်ရှင် (အကြောင်းအရာတိကျတဲ့) မှတိကျတဲ့ခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, ကိုကင်းရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့စဉ်ကကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏ activated ဒေသများသဘာဝရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့စဉ်အတွင်းကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏ activation မြေပုံပေါ်တွင် superimposed ခဲ့ကြသည် နှင့် t စမ်းသပ်မှုယုတ် activation တန်ဖိုးများကိုနှိုင်းယှဉ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဒေသများအား nondrug၊ evocative stimuli (content specific) က activate လုပ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုကာကိုလာသုံးစွဲမှု၏ activated ဒေသများသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်ဘာသာရပ်နှစ်ခုလုံး၏ activation မြေပုံများအပေါ်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ လိင်ရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့မှု။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေချန်လှပ်၏ ad hoc သဘောသဘာဝကှဲလှဲ၏အပြည့်အဝ factorial ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခွင့်ပြုရန်ပြည့်စုံဒေတာနှင့်အတူသိပ်မဘာသာရပ်များ left အဖြစ်သီးခြား t ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
လိင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုသောအခါတက်ကြွသောidentifyရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသောဘာသာရပ်များ၏သက်ဝင်မြေပုံများတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်တရားမဝင်သောအယူအဆကိုဆန့်ကျင်သည့်တစ် ဦး တည်းနမူနာ t စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ခုချင်းစီကို 0.0025 ၏ voxel ပညာရှိ p တန်ဖိုးနှင့် ၁၀၀-μlစပျစ်သီးပြွတ်စံနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အုပ်စုနှစ်ခုအကြားစာရင်းအင်းစစ်ဆေးမှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဤမြေပုံများကိုမြေပုံတစ်ခုခုတွင်သိလျှင် voxel ထည့်သွင်းနိုင်ရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ် Two- နမူနာ t ကိုစမ်းသပ်မှုပြီးတော့ဒီပေါင်းစပ်မြေပုံတစ်ခုချင်းစီစပျစ်သီးပြွတ်များအတွက်ယုတ် activation တန်ဖိုးများအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏တူညီ sequence ကိုသဘာဝရုပ်ရှင်များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင် 1 ရုပ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီအပြီးတွင်မေးသောမေးခွန်းများအတွက် Likert စကေး၏တုံ့ပြန်မှုအုပ်စုစုစုပေါင်းတွင်ပါဝင်သည်။ အချက်အလက်များအရကိုကင်းရုပ်ရှင်သည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်တဏှာအခြေအနေကိုအောင်မြင်စွာဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုနှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များထက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း၊ သဘာဝနှင့်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုနှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်မတူကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့သည်။ အလားတူပုံစံကိုသူတို့ရုပ်ရှင်များကမည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားမိပြီးအားစိုက်ထုတ်သည်နှင့်၊ ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီက၎င်းတို့ကိုကိုကင်းဆေးလိပ်သောက်လိုသည့်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်ပြီးနောက်မှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည့်အကြောင်းအရာများထက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလျော့နည်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကိုကင်းရုပ်ရှင်အားဤတုံ့ပြန်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ထပ်မံနှိုင်းယှဉ်မှုများလွယ်ကူစေရန်ပေါင်းစပ်တပ်မက်မှုရမှတ်ကိုတွက်ချက်သည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များကိုသိသိသာသာခွဲခြားထားသည့်မေးခွန်းငါးခုသည်အခြားဇာတ်ကားနှစ်ခုကိုအရူးတဏှာစွဲမက်ခြင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ စုပေါင်းတပ်မက်သည့်ရမှတ်သည်ဤမေးခွန်း ၅ ခု၏စုစုပေါင်းဖြစ်သည် (တိုးပွားလာသောတဏှာနှင့်အတူတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည့် ၁၀ ကြိမ်မှပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုင်းတာခဲ့သည်) ပေါင်းစပ်သည့်တွန်းအားရမှတ်သည်ဖယ်ထုတ်ပြီးထည့်သွင်းထားသောဘာသာရပ်များအကြားကိုကင်းတပ်မက်မှု၌ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ရုပ်ရှင်အမိန့်၏သက်ရောက်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ပေါင်းစပ်တပ်မက်မှုရမှတ်များမှာကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားလုံး (သိသိသာသာကွဲပြားသည် (အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်အချက်အလက် N = ၂၃ ဆုံးရှုံးသွားသည်)) နှင့်ကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည့်နှိုင်းယှဉ်သူများ (N = 23) (t = 18, df = 6.7, p <39) အဆိုပါကိုကာကိုးရုပ်ရှင်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (t = 0.0001, df = 6.4, p <21) တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသူတွေကိုပဲသူတို့အားဘာသာရပ်များအကြားအဖြစ်။ နောက်ထပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ခေါင်းကိုလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောသုံးစွဲသူများသည်အစီရင်ခံလိုသည့်စွဲလမ်းမှုတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုသူများထက်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (t = 0.0001, df = 1.9, p = 17) ။ တကယ်တော့, အလုပ်လုပ်တဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းဘာသာရပ်များအများဆုံးတပ်မက်သောဘာသာရပ်များအများဆုံးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပေမည်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှု၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ obviating, ပိုမိုမြင့်မားပေါင်းစပ်တပ်မက်လိုချင်သောအရမှတ် (0.07 နှိုင်းယှဉ် 27.7) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ရုပ်ရှင်မတိုင်မီနှင့်အပြီးကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည့်ကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများအတွက်ရုပ်ရှင်အမိန့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါင်းစပ်တပ်မက်လိုချင်သောအရမှတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် (t = 20.5, df = 0.4, p = 21) နှင့်ကိုကင်းရုပ်ရှင်၏လုပ်ဆောင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများ (t = 0.73, df = 0.1, p = 9) တွင်ပါ ၀ င်သူများအတွက်မှန်ကန်သည်။ ဆင်တူပေါင်းစပ်ရမှတ်ကိုလိင်ရုပ်ရှင် (ဥပမာ၊ လိင်ရုပ်ရှင်အကြောင်းမည်မျှဘာသာရပ်ကိုနှစ်သက်သည်၊ အားဖြည့်သည်စသည်တို့) နှင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်တွက်ချက်မှုနှင့်သဘာဝရုပ်ရှင် (ဆိုလိုသည်မှာဘာသာရပ်ရုပ်ရှင်သဘောသဘာဝကိုမည်မျှကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ စသည်တို့ကို။ ) ။ No လိင်နှင့်သဘာဝရုပ်ရှင်အတွက်မပြင်ဆင်ရသေးသည့် t tests နှင့်သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုကွဲပြားမှုကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်သောရုပ်ရှင်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသူများသာပါ ၀ င်သည်။
Functional Activation Analyse: Cocaine Craving
ကိုကာကိုလာအသုံးပြုသူများအတွက်ကိုကင်းရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့စဉ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဒေသ ၁၉ ခုသည်သိသာသောတုံ့ပြန်မှုများပြသသည် (စားပွဲတင် 2) ။ ၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့် frontal နှင့် limbic lobeb များဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး medial၊ ယုတ်ညံ့၊ အလယ်နှင့်အထက်သာလွန်သော front gyri အပြင်ရှေ့နှင့်နောက် cingulate gyrus တို့ပါ ၀ င်သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် activation အဆိုပါယုတ်ညံ့ parietal lobule တွင်တွေ့မြင်, left left activation ယာယီတိုင်၌တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသောအကျိုးစီးပွားဒေသများ, လက်ဝဲ caudate / နှစ် ဦး နှစ်ဖက် dorsal နျူကလိယနှင့် thalamus ၏ anterior နျူကလိယအတွက်, လက်ျာ insula နှင့် subcortically လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အကျိုးစီးပွားဤဒေသများ၏ ((13 ၏ 19)) အများစုကိုကင်းရုပ်ရှင်အားဖြင့်သွေးဆောင် activation နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များထက်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ် activation ပြသခဲ့သည် (စားပွဲတင်3နှင့် ပုံ 2) ။ ဤတူညီသောဒေသ (၁၃) ခုသည်သဘာဝရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေသောကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်သိသိသာသာပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်တူညီတဲ့ကိုကင်းရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သဘာဝရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုအသုံးပြုသူများတွင်ပစ္စုပ္ပန်မဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သောအားဖြင့်, ဤရလဒ်များကိုကိုတဏှာဘို့ဤဒေသများ 13 ၏တိကျသောစကားပြော။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသောဒေသများ၏လူနည်းစု (၁၉ ယောက်မှ ၄) သာလျှင်ကိုကာကိုလာကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်လိင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုနေသောကိုကင်းသုံးစွဲသူများကိုစမ်းသပ်သည့်အခါသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့ပြီး၊ ဤလေးခုအနက်မှတစ်ခုသည်လက်ဝဲယိုယွင်းသောရှေ့တန်းရှိ gyrus တွင်တည်ရှိသည်။ ယခင်နှိုင်းယှဉ်မှုနှစ်ခုအနက် (သို့မဟုတ်)စားပွဲတင် 3) ။ ကျန်သုံးခုကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်သိသာထင်ရှားသည့်ကျန်ဒေသသုံးခုသည် anterior cingulate gyrus၊ လက်ျာယုတ်ညံ့ parietal lobule နှင့်ဘယ်ဘက် caudate / lateral dorsal နျူကလိယအပေါ်ဗဟိုပြုသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် ၁၉ ဒေသ ၁၉ ခုအနက်လေးခုသာလျှင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကိုကာကိုလာကိုကြည့်ရှုသူများနှင့်လိင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှိုင်းယှဉ်သူများနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်ဒေသလေးခုစလုံးသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများကိုပိုမိုတက်ကြွစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ယုတ်ညံ့ parietal lobule လက်ျာတွင်ရှိသောတစ်ခုသာသည်ယခင်နှိုင်းယှဉ်ချက်များတွင်သိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအကျိုးစီးပွားသုံးခုသည်ညာဘက်အပေါ်ယံ gyrus၊ လက်ဝဲယို parietal lobule နှင့် thalamus ၏ anterior nucleus တွင်တည်ရှိသည်။ ဤရလဒ်များကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်ဤအုပ်စုအကြားနှင့်ရုပ်ရှင်အကြားနှိုင်းယှဉ်မှုများသည်ကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေသောကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏သက်ဝင်မြေပုံသို့ဘက်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
Functional Activation Analyse: လိင်နှင့်သဘာဝရုပ်ရှင်
လိင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သောအခါအလားတူဒေသများကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်ဘာသာရပ်များတွင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကျယ်ပြန့်တိုကျရိုကျ (medial, သာလွန်နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyri), anterior နှင့် posterior cingulate, နှစ်နိုင်ငံ insula, caudate, thalamic, occipital နှင့် cerebellar ဒေသများပါဝင်သည်။ ပိုများသောစုစုပေါင်းပမာဏ (၈,၉၄၂ μlနှင့် ၅၂၈၀ μl) တို့ပါ ၀ င်ပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့် ၀.၂၄% နှင့် ၀.၂၀% တို့ထက်ပိုမိုသောအစုအဖွဲ့များကိုကင်းသုံးစွဲသူများထက်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များတွင်တွေ့ရှိရသည်။ နှစ် ဦး စလုံးအုပ်စုများ၏ activated ပြွတ်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်နှင့် t ကိုစမ်းသပ်မှုပေါင်းစပ်ပြွတ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ယုတ် activation တန်ဖိုးများအပေါ်နှစ်ခုအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဤပေါင်းစပ်ထားသောမြေပုံရှိအစုအဝေး ၅၂ ခုတွင် ၂၉ ခုသည်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပြသခဲ့ပြီး ၂၃ ခုသည်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများထက်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များတွင်သိသိသာသာပိုမိုတက်ကြွမှုကိုပြသသည်။ သီးခြားစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်သောကြောင့် Bonferroni ဆုံးမခြင်း (p≤36) သည်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအရေအတွက်ကို ၁၀ သို့လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ဤအစုအဝေး၏ထက်ဝက်သည်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးတစ်ဝက်မှာ cerebellum, posterior cingulate နှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (စားပွဲတင် 4) ။ ဤအစုအဝေး ၁၀ ခုအနက်ကိုးခုသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများထက်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များပေါင်းစပ်မြေပုံပိုမိုစုစည်းလှူဒါန်းခဲ့သည်နှင့်စာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှု၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကစာရင်းကိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘို့ခွင့်ပြု, ဤဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုကင်းသုံးစွဲသူများကပြသသည်ထက်လိင်ရုပ်ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ပိုမိုကြီးမားတုံ့ပြန်မှုကိုပြသသည်။ ဤသည်ကိုကင်းရုပ်ရှင်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှရလဒ်များကိုမတူဘဲရပ်။
သဘာဝရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရာတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ (ပြွတ်ပြွတ် ၄ ခု) သို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များ (ပြွတ် ၂ ခု) တွင်အနည်းငယ်သောဒေသများသည်သိသာစွာသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။။ လက်ျာဘက် posterior cingulate နှင့်ညာ fusiform gyrus တွင်တည်ရှိသည့်ပြွတ် ၂ ခုသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာသာရပ်များတွင်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည်။ အခြား ၂ ခုမှာညာဘက်အပေါ်ယံ gyrus (Brodmann ၏areaရိယာ ၉) နှင့်ဘယ်ဘက် postcentral gyrus (Brodmann ၏areaရိယာ) တွင်တည်ရှိသည် 9), ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံပြသခဲ့သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသောကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်တိုင်တင်ပြချက်အပေါ် အခြေခံ၍၊ အက်ကွဲကြောင်းကင်းကိုဆေးလိပ်သောက်သောအမျိုးသားနှစ် ဦး ကိုသရုပ်ဖော်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ကိုကင်းတွန်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Functional MRI ၏ဆန်းစစ်ချက်များအရ ဦး နှောက်ဒေသများဖြန့်ဖြူးမှုကိုပြသသည့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားကြည့်ရှုနေစဉ်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်မှုသိသိသာသာမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြသည်။။ ဤဒေသများသည် prefrontal (medial နှင့် dorsolateral)၊ limbic (anterior နှင့် posterior cingulate) နှင့် parietal (နှစ်ဖက်အဆင့်နိမ့် parietal lobule) lobes တွင်ရှိသည်။ ညာဘက် insula နှင့်ဘယ်ဘက်ယာယီတိုင်ကိုလည်း activated ခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်းအဘို့ဤ activated ဒေသများ၏တိကျသောဆုံးဖြတ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တစ်အရေအတွက်ကဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပထမ ဦး စွာတုံ့ပြန်သည့်filmရိယာအများစုကိုကိုကင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးစဉ်ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာသာရပ်များထက်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသောအတိုင်းအတာဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ထိုကိုကင်းသုံးစွဲသူများပြသထားသောတုန့်ပြန်မှုသည်ရုပ်ရှင်၏မူလသဘောသဘာဝကိုထင်ဟပ်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုအကြံပြုသည်။ ကိုကင်းအသုံးပြုမှု၏သမိုင်းရှိခြင်းဘာသာရပ်အပေါ်သို့။ ဒုတိယအချက်မှာကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်ကြည့်နေသည့်သဘာဝဇာတ်ကားကိုကြည့်သည့်ကင်းကင်းသုံးစွဲသူများထက် ပို၍ ဦး နှောက်areasရိယာများပိုမိုလှုပ်ရှားသည် အဆိုပါကိုကင်းရုပ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာရန်။ ပေါင်းစပ်, ဒီလူ ဦး ရေနှင့်အကြောင်းအရာတိကျတဲ့ cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်များ၏အရေးပါ neuroanatomical အလွှာခွဲထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။
cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်၏ Neuroanatomical မူပြောင်းခြင်း
ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုသည်ကျယ်ပြန့်သော cortical activation ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင် cue- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတဏှာ၏ neuroimaging အစီရင်ခံစာများနှင့်များစွာကိုက်ညီသည်။ dorsolateral နှစ် ဦး စလုံး prefrontal (12-15) နှင့် anterior cingulate activation (13, 15-17, 26) တသမတ်တည်းမြင်ကြပြီ ယာယီဝင်ရိုးစွန်းလှုပ်ရှားမှုသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်သဘာဝရုပ်ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သောအခါဤဒေသတွင် ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးလာခြင်း၏မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ (17)နှင့်ကိုကင်းတဏှာနှင့်ဆက်စပ်သော parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး activation ကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (14, 26).
ကျနော်တို့ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်ဖြန့်ဝေထားသောသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များစွာ၏တွန်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အထောက်အထားအဖြစ်သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ neuroimaging လေ့လာမှုများစွာသည်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် frontal နှင့် parietal Co-activation တို့ကိုလေ့လာခဲ့သည် (27-30) နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတောင်းဆိုမှုများတာဝန်များကို (31, 32), ဒီလေ့လာမှုတွင်ဤအဆောက်အ ဦ များတွင်တွေ့မြင် activation တပ်မက်အတွက် frontoparietal အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအားဖြင့်ကိုကာကိုလာရုပ်ရှင်တစ် ဦး ပိုမိုမြင့်မားအာရုံကို၏ပါဝင်မှုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ဤတွေ့ရှိချက်၏ဆိုလိုရင်းမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ၏အာရုံစိုက်မှုနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောမွေးမြူခြင်းများသည်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်စနစ်အတွင်း၌စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းသည်တပ်မက်မှုအခြေအနေကိုစတင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်သည်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုသင့်လျော်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီး၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်လည်ညွှန်းကိန်းနှင့် subvocal အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းနည်းစနစ်များမှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွန်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။
ကိုကင်းစေ့တောက်ပနေစဉ်အတွင်း anterior cingulate ၏ activation ကိုမကြာခဏတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးသိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်ဟုယူဆရသည် (33, 34)။ သိမြင်မှု / မော်တာလုပ်ငန်းများနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုဆန့်ကျင်သည့် cingulate activations နှင့်ခြားနားသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုသည်ယခင်လေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိရသော cingulate activation ပါ ၀ င်သည့် anterior area သို့ရောက်သည်။ (35)။ Posner နှင့် Rothbart (36) အဆိုပါ cingulate အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်အလတ်စားတိုကျရိုကျဒေသများကိုလည်းအဆိုပြုထားသည် (37, 38)ဤဒေသများရှိကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်ကိုကင်းဓာတ်သုံးစွဲစဉ်ကာလအတွင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသောလှုပ်ရှားမှုများကိုရှင်းပြနိုင်သည့်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှစ်ခု၏ medial frontal activation မှအထောက်အပံ့ပေးသောထင်မြင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြေရှင်းသည့်လေ့လာမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့် Reiman (39) ရှေ့ပိုင်း cingulate နှင့် medial prefrontal ဒေသ (Brodmann ၏9ရိယာ ၉) တွင်ပါ ၀ င်သည်မှာသတိရှိရှိအတွေ့အကြုံ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအခြေအနေကိုပါ ၀ င်သည်။ ဒါဟာပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ anterior cingulate နှင့် medial prefrontal activations ကိုကင်းတဏှာ၌ဤစိတ်ခံစားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုယန္တရားများ၏ပါဝင်မှုကိုထင်ဟပ်ကြောင်း, ထို့ကြောင့်ကောက်ချက်ချဖို့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။
ဤဒေသသည် hypertonic ဆားငန်ရေငတ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်မှုတွင်အတက်ကြွဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည့်အတွက်ကိုကင်းတွန်းအားပေးစဉ်အတွင်း activated posterior cingulate ဒေသသည်“ ပုံမှန်” endogenous drive state သို့မဟုတ်တဏှာတုံ့ပြန်မှု၏ပါဝင်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည် ဘာသာရပ်များ (40)။ တနည်းအားဖြင့် Vogt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (34) ပတ်ဝန်းကျင်အကဲဖြတ်အတွက်အကဲဖြတ်အခန်းကဏ္ and နှင့် posterior cingulate တစ်ခုမှတ်ဉာဏ်အခန်းကဏ္ assigned တာဝန်ပေးအပ်။ Retrosplenial အသက်သွင်းခြင်းကိုယခင်က cue- သွေးဆောင်တဏှာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားသည် (14) နှင့်ခြိမ်းခြောက်မှု -related စကားများတင်ပြစဉ်အတွင်း (41) နှင့်နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်ဤemotionalရိယာအထူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်တရများ၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုချက်နှင့်ကိုက်ညီ, Episode မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်ဖို့အနက်ထားပြီး (42).
ဒေသတွင်းအသက်သွင်းခြင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ post-hoc ခန့်အပ်မှုသည်အတန်ငယ်မှန်းဆမှုများနှင့်ကိုကင်းတပ်မက်မှု၏အလုပ်လုပ်နေသောခန္ဓာဗေဒတွင်အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏တိကျသောအခန်းကဏ္addressကိုဖြေရှင်းရန်စမ်းသပ်ချက်များမှသက်သေထူသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကိုကင်းသုံးစွဲသူများနှင့်ကိုကင်းရုပ်ရှင်၏ contents မှတိကျတဲ့ဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိထားပြီး activation ပုံစံကိုမူးယစ်ဆေးဝါး - naive ဘာသာရပ်များအတွက်အခြားစမ်းသပ်ချက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသောတိုက်နယ်မှတဆင့်ထင်ရှားစွာတဏှာတုံ့ပြန်မှုယုတ္တိတန်သည်ဟုထင်ရှား ။ ဒါဟာယခင်က nondrug စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်းများတွင်ဖော်ပြထားသောသိမြင်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဟာတဏှာတုံ့ပြန်မှုပေါ်ထွက်လာရာမှတူညီသော ဦး နှောက်ဒေသများက Subserved တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်ကိုကင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်တုန်ခါနေသောနေရာများမှလူနည်းစုသည် activation တွင်သိသိသာသာကွဲပြားကြသည်။ ထို့အပြင်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာသာရပ်များ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လေ့လာတွေ့ရှိသောတုန်လှုပ်စေသောနေရာများမှလေးရုံမျှသည် activation နှင့်ကွဲပြားသည်။ အတူတူဤတွေ့ရှိချက်များကကိုကင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အခြား nugrug, evocative လှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံသော ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထပ်နေသည်။ ဤထပ်နေသည် medial တိုကျရိုကျဒေသအားလုံး၊ ကျန် dorsal တိုကျရိုကျဒေသအားလုံးနှင့် cingulate ဒေသအများစုတွင်ပါဝင်သည်။ စိတ် ၀ င်စားမှုနည်းသော parietal lobule တွင်တည်ရှိသောစိတ် ၀ င်စားမှုရှိသောဒေသတစ်ခုသည်စီစဉ်ထားသည့်နှိုင်းယှဉ်မှုများအားလုံးတွင်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်းအတွက်အထူးတိကျသောဖြစ်ပုံရသော်လည်း၎င်းသည်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်း၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုသင့်သည်။ အစား, ငါတို့ cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအားများအတွက် neuroanatomical အလွှာအဖြစ်ဖော်ထုတ်အကျိုးစီးပွားရှိသူတို့ဒေသများ၏ဆိုလိုမှဤရလဒ်များကိုအနက်ကိုဘော်ပြအများစုသည်အခြား evocative လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး - naive နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှစ် ဦး စလုံးအတှကျဒါခဲ့ကြသည်။ ယင်းသည်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်း၌ဤတိကျသောဒေသများ၏အခန်းကဏ္necessarilyကိုသေချာပေါက်လျော့နည်းသွားစေမည်မဟုတ်သော်လည်းကိုကင်းသုံးစွဲသူအတွက်ထူးခြားသောတိုက်နယ်တစ်ခုကကိုကင်းတပ်မက်မှုအားတုန့်ပြန်မှုမရှိဟုအကြံပြုထားသည်။ ယင်းသည်ကိုကိန်းသုံးစွဲသူအတွက်ထူးခြားသောဤတိုက်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဤထူးခြားသည့်ကြီးမားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ပုံမှန် ဦး နှောက်စနစ်များကိုလိုချင်သောဆန္ဒအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ကိုကင်းမှီခိုမှုဟုလူသိများသည့်အကြီးအကျယ်ရောဂါဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းအချို့ကိုအလင်းပေးသည်။
ဒါဟာကိုကင်းရဲ့အာနိသင်ဟာ mesocorticolimbic dopamine system ကိုတိုက်ရိုက်သက်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ (43)။ ၎င်းသည်ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည်နောက်ဆက်တွဲရုပ်သိမ်းခြင်းကာလအတွင်း ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဆုများတိုးမြှင့်ပေးကြောင်းပြသခဲ့သည် (44). အလားတူစွာနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်သဘာဝလှုံ့ဆော်မှု၏အားဖြည့်စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်လိင်မှုကိစ္စအပေါ်ကိုကင်းအားပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်သတင်းပို့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကိုကင်းတွန်းအားက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေသအများစုဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (အလားတူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအကြားတက်ကြွမှုမှာသိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ) ကိုအလားတူစွာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကိုကာကိုလာအသုံးပြုသူများသည်လိင်ရုပ်ရှင်နှင့်သက်ဆိုင်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာသာရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုအားလျော့နည်းစေသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အရေးကြီးသောလက်တွေ့အကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်းသည်တူညီသော ဦး နှောက်ဒေသများမှခွဲခြားထားလျှင်သဘာဝအလျောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော / လှုံ့ဆော်ပေးသောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့် activated သော ဦး နှောက်ဒေသများမှခွဲလျှင်၎င်းသည်ပုံမှန်“ စိတ်” စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဦး စားပေး ဦး စားပေးမှုများကိုပြန်လည်ရေးနိုင်သည်။ (45). အကယ်၍ ကိုကင်းသည် ဦး နှောက်၏အကျိုးစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုလုပ်ဆောင်ရုံသာမကပူးပေါင်းပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်သာမန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများကိုပြန်လည်ရေးရန် ဦး ဆောင်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ သာမန်ဆုလာဘ်များအပေါ် attenuated တုန့်ပြန်မှုသည်တုန်လှုပ်နေသောအခြေအနေတွင်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးကိုကင်း၏လိုချင်သောဆန္ဒကိုထပ်မံဖြည့်တင်းပေးသည်။
မှတ်သားသင့်သည်မှာကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏သေးငယ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနောက်ပိုင်းတွင်လိင်အုပ်စုများအကြားတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်အတန်ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခဲ့ကြသောသုံးစွဲသူများသည်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအားသူတို့၏အကဲဖြတ်မှုတွင်ပိုမိုရိုးသားကြသည် (အကြံပြုချက်မှာနှိုင်းယှဉ်မှုအကြောင်းအရာများသည်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်မှုအတိုင်းအတာအားနည်းပါးစွာတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်) ။ ကိုကာကိုလာကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံရန်အတွက်မေးခွန်းများကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ရှင်၏သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်း၏အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုလိင်နှင့်ဆန့်ကျင်။ (အတင်းအကျပ်ရွေးချယ်မှုကဲ့သို့) ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်၊ လိင် (သို့) ကိုကင်းသည်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုထင်ဟပ်စေသည့်အပြုအမူညွှန်းကိန်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍ ကောက်ယူသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုသည်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကို“ ပုံမှန်” သတိ (ဆိုလိုသည်မှာနှုတ်ဖြင့်) အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၎င်းကိုခံစားရန်အာရုံကြောဆိုင်ရာစွမ်းရည်အားနည်းခြင်းနှင့်၎င်းသည်“ လက္ခဏာသို့မဟုတ်ပြည်နယ်” ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သိသာသောခွဲထွက်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။
cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအားသည်မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏အဓိကအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ကျနော်တို့ cue- သွေးဆောင်တဏှာပြည်နယ်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်သောအဓိကအား prefrontal နှင့် limbic, cortical activation ၏ဖြန့်ဝေပုံစံကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနသည်ဤသီးခြားဖြစ်စဉ်များ၏ဆွေမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု disentangle နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာအနက်တစ်ခုမှာထင်မြင်ချက်တစ်ခုမှာ corsulate နှင့် medial prefrontal activations များသည်တပ်မက်သောတုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး dorsal prefrontal နှင့် parietal areasရိယာများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်မြှင့်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်၊ ကိုကင်းလှုံ့ဆော်မှု။ တဏှာဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်များ၏ဆက်စပ်မှု၏အရေးပါမှုနှင့်အပြန်အလှန်မှီခိုမှုအဆင့်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်တပ်မက်မှုအားတားဆီးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုလျော့ပါးစေခြင်းတို့အတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာကြား ၀ င်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီသင့်သည်။ တဏှာဆိုဒ်များအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သောဒေသအများစုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကိုအလားတူတုံ့ပြန်မှုများပြသခဲ့သည်။ အတူတူယူ, ဤရလဒ်များကိုကင်းပုံမှန်ဆုလာဘ် / စိတ်ခံစားမှု circuitry အပေါ်ပြုမူနှင့်ကိုကင်းတပ်မက်သောအားဖြင့်ရဲ့အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အသုံးပြုသူမှတ်ဉာဏ်အပေါ်သို့ကျိန်းဝပ်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အကောင်းမြင်မှတ်ချက်တစ်ခုအရပုံမှန်လေ့လာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုသိပြီးသားဖြစ်သောသည် cue- သွေးဆောင်လိုသောစိတ်ကိုနားလည်ရန်အသုံးချပြီးသင့်လျော်သောဆေးဝါးနှင့်အပြုအမူ / သိမြင်မှုဆိုင်ရာကြား ၀ င်မှုများအကြောင်းကြားနိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာ 30, 1999 ကိုလက်ခံရရှိ; ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်ဇွန်လ 16, 2000 ကိုလက်ခံရရှိ; စိတ်ပညာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆေးပညာဌာန၊ ဆေးဝါးဗေဒဌာနနှင့်ဇီဝရူပဗေဒသုတေသနအင်စတီကျု၊ Wisconsin ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်မှဖြစ်သည်။ Wisconsin ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်၊ စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနဒေါက်တာစတိန်းအားမီလ်ဝူးကီး၊ WI 30 သို့ပြန်လည်ပေးပို့ရန်တောင်းဆိုခြင်း။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (အီးမေးလ်) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (DA-09465) နှင့် NIH လက်တွေ့သုတေသနစင်တာမှထောက်ပံ့ငွေ (RR-00058) မှထောက်ပံ့သည်။ စာရေးသူများသည် Scott Fuller၊ Harold Harsch၊ Renee Koronowski၊ Toni Salm နှင့် Doug Ward တို့၏အကူအညီနှင့်ဒေါက်တာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူတို့၏အကြံဥာဏ်နှင့်အားပေးမှုအတွက် Charles O'Brien၊ Anna Rose Childress နှင့် Steven Grant တို့ဖြစ်သည်။
ပုံ ၁။ ကိုကင်းသုံးစွဲမှု၏ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းနှင့်ထိတွေ့စဉ်ကအတွေ့အကြုံရှိသောကိုကင်းသုံးစွဲသူအတွက်တုန့်ပြန်သော ဦး နှောက် Voxel အတွက် fMRI အချက်ပြမှု၏အချိန်သင်တန်းa
aအဆိုပါမျဉ်းကြောင်းလိုင်းကိုကင်းအသုံးပြုမှု၏ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်ထိတွေ့စဉ်ကကိုအသုံးပြုသူအတွက် activation တိုးမြှင့်ပြသသော voxel ထံမှ fMRI အချက်ပြ၏အချိန်သင်တန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ၀.၁၁ Hz ထက်ပိုမိုသောကြိမ်နှုန်းကိုပထမဆုံးဖယ်ရှားရန်စစ်ထုတ်သည့်အချိန်စီးရီးကိုရုပ်ရှင်၏ပထမစက္ကန့် ၉၀ အတွင်း၌သာအခြေခံမှထွက်ခွာရန်ဖိအားပေးသော beta function (ပုံသေပြတ်သားသောလိုင်းဖြင့်ပြသည်) ဖြင့်ပုံစံပြုခဲ့သည်။ ဒီထွက်ခွာသွားအမှတ်မတိုင်မီအချိန်စီးရီးတစ်ခု linear လမ်းကြောင်းသစ်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကွေးအတိုင်းအတာအောက်ရှိpercentageရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်းကို fit ၏ linear အပိုင်းကို ဆက်၍ (dashed line)၊ dashed line နှင့် beta fit ကြားရှိcalcရိယာကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်၎င်းကို Flat line အောက်ရှိစုစုပေါင်းofရိယာ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ (မထိုက်မတန်၏ linear သောအဘို့ကိုနှင့် dashed လိုင်း) ။ beta ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ပုံသေနည်းမှာ y = k [x ဖြစ်သည်(α-1) (၁ - x) β-1)] x>0အတွက်၊ x ၏ပုံစံသည်မော်ဒယ်စတင်ချိန်ပြီးနောက်အချိန်ကာလတစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ပုံ ၂။ အတွေ့အကြုံရှိသောကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများတွင် cue-inced Cocaine တုန်ခါမှုနှင့်ဆက်စပ်သော Functional Brain Activationa
aအပိုင်း A က parietal cortex နှင့်နောက်ဘက် cingulate တွင်ဘယ်ဘက်ခြမ်း activation တွင်နှစ်ဖက်သက်ဝင်မှုကိုပြသည်။ တိုကျရိုကျအမြှေးအတွက် dorsolateral activation အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyrus အပေါ်ဗဟိုပြုနေသည်။ အဆိုပါ coronal အချပ်ဟာရှေ့ commissure မှ 52 မီလီမီတာနောက်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း B က medial တိုကျရိုကျ gyrus နှင့် anterior နှင့် posterior cingulate အတွက် anterior ကနေ posterior မှဘယ်ဘက်ခြမ်း activation ဖော်ပြသည်။ Coronal အချပ်သည် ၄၇ မီလီမီတာအရှေ့ရှိ commissure နှင့်ရှေ့ပိုင်း commissure ၏ရှေ့ဆုံးတွင်ရှိပြီး sagittal အချပ်သည်အလယ်အလတ်မှ ၉ မီလီမီတာရှိသည်။
1. Wikler A: မော်ဖင်းအကိုက်စွဲခြင်း၏အာရုံကြောနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒအခြေခံသုတေသနအပေါ်တိုးတက်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1948; 105: 329-338 လင့်ခ်
2. ပညာရှိ RA: စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology: စွဲလမ်းမှု၏နားလည်မှုနှင့်ကုသမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ J ကို Abnorm Psychol 1988; 97: 118-132 CrossRef, Medline
3. Childress AR၊ Ehrman R၊ Rohsenow DJ၊ Robbins SJ, O'Brien CP - မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ အလွဲသုံးစားမှု - ပြည့်စုံသောဖတ်စာအုပ်။ Lowinson JH၊ Ruiz P၊ Langrod JG မှတည်းဖြတ်သည်။ Baltimore, ဝီလျံ & Wilkins, 1992, စစ 56-69
4. Halikas JA, Kuhn KL, Crosby R, Carlson G, Crea F - မင်နီဆိုးတားကိုကင်းတွန်းအားနှုန်းကို အသုံးပြု၍ ကိုကင်းလူနာများအတွက်စွဲလမ်းမှုကိုတိုင်းတာသည်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 1991; ၂၃: ၂၂-၂၇ CrossRef
5. Stewart J: ventral tegmental inရိယာ၌ morphine ကို intracerebral application ဖြင့်ကြွက်တွင်ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူအားပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 1984; 20: 917-923 CrossRef, Medline
6. Jaffe JH၊ Cascella NG၊ Kumor KM၊ Sherer MA - ကိုကာကိုလာအားကိုးအားထားတွန်းအား။ psychopharmacology (Berl) 1989; 97: 59-64 CrossRef, Medline
7. Sinha R၊ Catapano: D၊ O'Malley S: ကိုကာကိုလာမှီခိုနေရသည့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) ၁၉၉၉; 1999: 142-343 CrossRef, Medline
8. ကလေးငယ် AR၊ Hole AV၊ Ehrman RN၊ Robbins SJ, McLellan AT, O'Brien CP - မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုတွင် Cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုပြုခြင်း။ NIDA Res Monogr 1993; 137: 73-95 Medline
9. Kilgus MD, Pumariega AJ: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအားဖြင့်ကိုကင်းတပ်မက်မှုကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ တောင်ပိုင်း Med J ကို 1994; 87: 1138-1140
10 ။ Modesto-Lowe V, Burleson JA, Hersh D, Bauer LO, Kranzler HR: naltrexone ၏အရက်နှင့်ကိုကင်းအပေါ်စွဲလမ်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်သေစာမှီခို 1997; ၄၉: ၉-၁၆ CrossRef, Medline
11 ။ Wallace BC - ကိုကင်းဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်အက်ကွဲခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်။ J ကို Subst အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံမှု 1989; ၆: ၉၅–၁၀၆ CrossRef, Medline
12 ။ Volkow ND, Fowler JS, Wolf AP, Hitzemann R, Dewey S, Bendriem B, Alpert R, Hoff A: ကိုကင်းမှီခိုခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းတွင် ဦး နှောက်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုပြောင်းလဲမှုများ။ Am J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1991; 148: 621-626 လင့်ခ်
13 ။ Maas LC၊ Lukas SE၊ Kaufman MJ၊ Weiss RD, Daniels SL, Rogers VW, Kukes TJ, Renshaw PF: cue- သွေးဆောင်သည့်ကိုကင်းတပ်မက်သည့်ကာလအတွင်းလူ့ ဦး နှောက်ကိုလုပ်ဆောင်မှု၏သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 155: 124-126 လင့်ခ်
14 ။ Grant S, London ED, Newlin DB, Villemagne VL, Liu X, Contoreggi C, Phillips RL, Kimes AS, Margolin A ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 1996; 93: 12040-12045
15 ။ GriBRR၊ Riorden JP၊ Mathew RT၊ Rosen BR၊ Hyman SE: ကိုမင်း၏လူ့ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများ။ Neuron 1997; 19: 591-611 CrossRef, Medline
16 ။ Childress AR, McElgin W, Mozley D, O'Brien CP ။ cue- သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတုန်ခါမှုနှင့်အခြားနှိုးဆွမှုအခြေအနေများအတွင်း ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 1997 အဘို့အ Society ၏ abstraction; ၂၃: ၂၁၄၆
17 ။ Childress AR, Mozley PD, McElgin W, Fitzgerald J, Reivich M, O'Brien CP: cue-induced cocaine craving အတွင်း Limbic activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 156: 11-18 လင့်ခ်
18 ။ Robbins SJ, Ehrman RN: လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအေးစက်စေရန်လေ့လာခြင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1992; 106: 143-153 CrossRef, Medline
19 ။ Ehrman RN, Robbins SJ, Childress AR, O'Brien CP: ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလူနာများအတွက်ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအခြေအနေအလိုက်တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1992; 107: 523-529 CrossRef, Medline
20 ။ ကော့ဖ်မန်းဂျေ၊ လီဗင် JM၊ ကွတ်စ်တီဂျီ၊ ဗီလာဖာဖါရရာ၊ ဟင်နင်ဂျေ၊ လူးဆက်စ်၊ မင်ဒယ်ဆန်ဂျဟ၊ Renshaw PF ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်သေစာမှီခို 2000; 58: 35-42 CrossRef, Medline
21 ။ Wong EC, Boskamp E, Hyde JS: ၁၁ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်သိပ္ပံကွန်ဂရက်၏တရားစွဲဆိုမှုတွင်အသံအတိုးအကျယ်အမြင့်ဆုံး quadrature elliptical endcap birdcage ဦး နှောက်ကွိုင် (Abstract 4015) ။ ဗီယင်နာ၊ ဆေးပညာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ၁၉၉၂
22 ။ ကော့ RW: AFNI: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု neuroimages ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် visualization များအတွက် software ကို။ ကွန်ပျူတာ Biomed Res 1996; 29: 162-173 CrossRef, Medline
23 ။ ရပ်ကွက် BD, Garavan H ကို, Ross က TJ, Bloom AS, ကော့ RW, Stein EA: fMRI အချိန်စီးရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် Non-linear ဆုတ်ယုတ်။ NeuroImage 1998; ၇: ၅၇၆၇
24 ။ Talairach J, Tournoux P: လူ့ ဦး နှောက်၏ Co-Planar Stereotaxic Atlas ။ နယူးယောက်, Thieme ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, 1988
25 ။ Forman SD, Cohen JD, Fitzgerald M, Eddy WF, Mintun MA, Noll DC: အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) တွင်သိသာထင်ရှားသောသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအားတိုးတက်အောင်အကဲဖြတ်ခြင်း - စပျစ်သီးပြွတ် - အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ Magn Reson Med 1995၊ 33: 636-647 CrossRef, Medline
26 ။ Kilts CD, Schweitzer JE, Quinn C, Gross RE, Faber T, Muhammad F, Hoffman J, Drexler K: လူ့ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းမှုတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲလိုမှု၏ခန္ဓာဗေဒ။ Neuroimage 1998; 7: S925
27 ။ Courtney SM, Ungerleider LG, Keil K, Haxby JV: အရာဝတ္ထုနှင့် Spatial visual အလုပ်လုပ်သော memory သည် cortex တွင်သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုသက်ဝင်စေသည်။ Cereb Cortex 1996; ၆: ၃၉-၄၉ CrossRef, Medline
28 ။ Klingberg T, Kawashima R, Roland PE: Multi-modal cortical ofရိယာများအားဖွင့်ခြင်းသည်တိုတောင်းသောမှတ်ဥာဏ်ကိုအခြေခံသည်။ Eur J ကို Neurosci 1996; 8: 1965-1971
29 ။ Klingberg T, O'Sullivan BT, Roland PE: အလုပ်လုပ်နေသည့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်း၌ ၀ ယ်လိုအားကိုတိုးပွားစေခြင်းဖြင့် Fronto-parietal ကွန်ယက်များ၏နှစ်ဘက်စလုံးကိုအားဖြည့်ခြင်း။ Cereb Cortex 1997; 7: 465-471 CrossRef, Medline
30 ။ Jonides J၊ Schumacher EH, Smith EE, Koeppe RA, Awh E, Reuter-Lorenz PA, Marshuetz C, Willis CR: နှုတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်တွင် parietal cortex ၏အခန်းကဏ္။ ။ J ကို Neurosci 1998; 18: 5026-5034
31 ။ Pardo JV, Fox PT, Raichle ME - positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography အားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်ရန်လူ့စနစ်တည်နေရာ။ သဘာဝ 1991; 349: 61-64 CrossRef, Medline
32 ။ Rosen AR၊ Rao SM၊ Caffarra P၊ Scaglioni A၊ Bobholz JA, Woodley SJ, Hammeke TA၊ Cunningham JM, Prieto TE, Binder JR: endogenous နှင့် exogenous Spatial orientation ၏အာရုံကြောအခြေခံ - fMRI လေ့လာမှု။ J ကို Cogn Neurosci 1999; 11: 135-152 CrossRef, Medline
33 ။ Devinsky O, Morrell MJ, Vogt BA: အမူအကျင့်အတွက် anterior cingulate cortex ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ ဦး နှောက် 1995; 118: 279-306 CrossRef, Medline
34 ။ Vogt BA, Finch DM, Olson CR: cingulate cortex တွင်သန္ဓေသားသန္ဓေတည်မှု - anterior အလုပ်အမှုဆောင်နှင့်နောက်ပိုင်းအကဲဖြတ်ဒေသများ။ Cereb Cortex 1992; 2: 435-443 Medline
35 ။ ဘုရ်ှ G, Whalen PJ, Rosen BR, Jenike MA, McInerney SC, Rauch SL: အဆိုပါရေတွက် Stroop: fMRI နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging-validation လေ့လာမှုအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုလုပ်ငန်း။ Hum ဦး နှောက် Mapp 1998; ၆း၂၇-၂၈၂ CrossRef, Medline
36 ။ Posner MI, Rothbart MK: အာရုံစူးစိုက်မှု၊ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol Sci 1998၊ 353: 1915-1927
37 ။ George MS၊ Ketter TA၊ Parekh PI၊ Horwitz B၊ Herscovitch P, Post RM - ကျန်းမာသောအမျိုးသမီးများအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကာလအတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1995; 152: 341-351 လင့်ခ်
38 ။ Lane RD, Reiman EM, Bradley MM, Lang PJ, Ahern GL, Davidson RJ, Schwartz GE: သာယာသောနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ Neuroanatomical ဆက်စပ်မှုများ။ Neuropsychologia 1997; 35: 1437-1444
39 ။ Reiman EM: ပုံမှန်နှင့်ရောဂါဗေဒစိတ်ခံစားမှုများကိုလေ့လာရန် positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography ကိုအသုံးပြုခြင်း။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; ၅၈: ၄-၁၂ Medline
40 ။ Denton: D, Shade R, Zamarippa F, Egan, G, Blair-West J, McKinley M, Lancaster J, Fox P: အခြေခံအားဖြင့်သတိ၏မူလအစနှင့်ရေငတ်မှု၏ကိန်းဂဏန်းနှင့်အပြန်အလှန်သရုပ်ဖော်မှု၏ neuroimaging နှင့် interoceptor- မောင်းနှင်မှု၏သီအိုရီသီအိုရီ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 1999; 96: 5304-5309
41 ။ Maddock RJ, Buonocore MH: ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးများ၏အာရုံတင်ဆက်မှုအားဖြင့်ဘယ်ဘက် posterior cingulate gyrus ကို Activation လုပ်ခြင်း - fMRI လေ့လာမှု။ Psychiatry Res Neuroimaging 1997; ၇၅း၁-၁၄ CrossRef, Medline
42 ။ Maddock RJ: အဆိုပါ retrosplenial cortex နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု: လူ့ ဦး နှောက်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging မှအသစ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci 1999; 22: 310-316 CrossRef, Medline
43 ။ Koob GF, Robledo P, Markou A, Caine SB - မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုနှင့်ဆုလာဘ်ရှိ mesocorticolimbic circuit သည်တိုးချဲ့ amygdala အတွက်အခန်းကဏ္? တစ်ခုလား။ Limbic Motor Circuits နှင့် Neuropsychiatry မှာပါ။ Kalivas PW၊ Barnes စီဒီမှတည်းဖြတ်သည်။ Boca Raton, Fla, CRC စာနယ်ဇင်း, 1993, စစ 289-310
44 ။ Markou A, Koob GF: Postcocaine anhedonia - ကိုကင်းဖယ်ထုတ်မှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology 1991; ၄း၁၇-၂၆ Medline
45 ။ Robbins TW, Everitt BJ: မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း - အကျင့်ဆိုးများပေါင်းလာသည်။ Nature 1999၊ 398: 567-570 CrossRef, Medline